Uhlobo C Ishaja, Voltage Stabilizer, Sine Wave Ups - Staba Electric
I-Triac Control Voltage Stabilizer
Edluliselwe Uhlobo Stabilizer
IServo Motor Type Voltage Stabilizer
Isigaba Esithathu se-Industrial Servo Motor Voltage Regulator
Isigaba Esisodwa se-Industrial Servo Motor Voltage Regulator
Kusuka ku-2017, uStaba useqalile ukwenza ucwaningo nentuthuko kumikhiqizo yeshaja ye-PD GaN.I-GaN tech ingukuguqulwa kwemboni yeshaja, le shaja ingasebenzisa i-transformer encane nezinye izinto ezinciphisayo, ngaleyo ndlela inciphise ngempumelelo usayizi weshaja we-GaN nokukhiqiza ukushisa, futhi ithuthukisa ukusebenza kahle…
Ephathekayo esheshayo uhlobo gan c adaptha odongeni usb ishaja PD 18W
Ishaja entsha ye-usb eshaja ngokushesha eshaja usb PD30W
Ikhwalithi ephezulu ye-usb eshaja ngokushesha udonga smart usb ishaja PD30W
I-adaptha yodonga olusheshayo olusheshayo olunamandla amakhulu i-adaptha yodonga lwe-USB 65W
Amandla adumile wokuhamba aphezulu 65W uhlobo c pd usb ishaja PD65W
Isizukulwane sakamuva somuthi ophathekayo umuthi ophathekayo weshaja yeselula PD100W
14 Okthoba 2020
Ufuna amandla amaningi, kodwa ngokushesha? Le tech entsha yokushaja i-GaN ithi ingaletha
Izinsuku zokugoqa izitini zamandla amakhulu nezintambo eziningi ukugcina amadivayisi akho ethe chithi saka zingaphela. Ukulinda amahora okuthi i-smartphone noma ilaptop yakho ishaje, noma ukumangazwa ishaja eshisayo eshaqisayo, nakho kungaba yinto yesikhathi esedlule. Ubuchwepheshe beGaN bulapha futhi buthembisa uku ...
Kuyini ukulethwa kwamandla ka-USB?
Kodwa-ke, lolu daba lokuhambisana seluzoba yinto yesikhathi esedlule ngokwethulwa kwe-USB Power Delivery Specification. I-USB Power Delivery (noma i-PD, ngamafuphi) iyindinganiso eyodwa yokushaja engasetshenziswa kuwo wonke amadivayisi we-USB. Imvamisa, idivayisi ngayinye ekhokhiswa i-USB izoba nez ...
Kuyini iGallium Nitride?
IGallium Nitride iyi-semiconductor eqondile ye-bandgap kanambambili efaneleke kahle kuma-transistor anamandla amakhulu akwazi ukusebenza emazingeni okushisa aphezulu. Kusukela ngawo-1990, ibisetshenziswa ngokujwayelekile kuma-diode akhanyayo (i-LED). IGallium nitride ikhipha ilambu eliluhlaza okwesibhakabhaka elisetshenziselwe ukufundwa nge-disc ku-Blu-r ...
IStaba Electric Co., Ltd
No 87, Dongfu 4 umgwaqo, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China